Hay'adaha samafalka oo tegi doona Taaciz - BBC News Somali
Hay'adaha samafalka oo tegi doona Taaciz
18 Disembar 2015
Image caption Shirka Qaramada Midoobay ee wadaxaajoodka colaadda Yemen
Ka qeybgalayaasha wadahadalada lagu doonayo in lagu soo afjaro colaadda dalka Yemen ayaa ku heshiiyay in hay’adaha samafalka si degdeg ah loogu ogolaado inay tagaan magaalada Taaciz.
Wadahadaladan oo ay garwadeen ka tahay Qaramada Midoobay, kana dhacaya dalka Switzerland, ayaa galaya maalintii afraad waxaana saraakiisha Qaramada Midoobay ay sheegayaan in ay rajaynayaan in wadahadalada ay sii socdaan dhowr maalmood oo kale.
Wakiilada dowladda Yemen iyo fallaagada Xuutiyiinta ku kala matalaya wadaxaajoodkan ayaa iskudayaya in ay heshiis kama dambeys ah ka gaaraan sidii lagu soo afjari lahaa colaadda.
Gargaarkan bini’aadamnimo ayaa waxa uu noqon doonaa mid ay ku diirsadaan kumannaan qof oo rayid ah oo ku nool magaalada Taaciz oo ah magaalada saddexaad ee ugu weyn dalka Yemen.
Magaaladan ayaa Qaramada Midoobay waxa ay ku sheegtay in ay ku jirtay go’doon muddo usbuucya ah xilli ciidammada dowladda Yemen ee uu Sucuudigu baritaaro ay dagaal ku salaysan gacan ku haynta magaalada ay kula jireen fallaagada Xuutiyiinta.
Heshiiskan ogolaanaya gargaarka bini’aadamnimo ayaa astaan u ah in wadahadalada nabadda ay u socon doonaan si wanaagsan, si ka duwan kuwii fashilmay bishii June ee la soo dhaafay.
Markanna kooxaha isku haya siyaasadda dalkaasi ayaa fool ka fool isu soo horfariistay, sidoo kalana waxa ay horumar ka gaareen is-dhaafsiga maxaabiis.
Haatana diblumaasiyiinta Qaramada Midoobay waxa ay rajaynayaan in wadaxaajoodayaashu ay u gudbaan arrimaha xasaasiga ah, sida in dib loo kala durjiyo ciidammada hubkana la kala qaado, xabad joojin waarta, iyo ugu dambeyntii in xal siyaasadeed gabi ahaanba lagu dhameeyo colaadda dalkaasi Yemen ka taagan.